सबै घरभित्रै यति ठूलो बाढी पस्यो, एकाएक डु’ब्न थालेपछि हेर्नुस् राता रात एस्तोसम्म भयो ।। (भिडियो सहित) – Khabar28media
सबै घरभित्रै यति ठूलो बाढी पस्यो, एकाएक डु’ब्न थालेपछि हेर्नुस् राता रात एस्तोसम्म भयो ।। (भिडियो सहित)
July 25, 2021 July 25, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
पक्की घरभित्रै यति ठूलो बाढी पस्यो, एकाएक डु’ब्न थालेपछि हेर्नुस् रातारात एस्तोसम्म भयो ।। (भिडियो हेर्नुस्) पक्की घरभित्रै यति ठूलो बाढी पस्यो, एकाएक डुब्न थालेपछि हेर्नुस् रातारात एस्तोसम्म भयो ।। (भिडियो हेर्नुस्) अन्तिममा छ पुरा हेर्नुहोला, यो खबर पनि पढ्नुहोस् !!
“यी राशिका व्यक्ति-ले सुन लगाउँदा मिल्छ लाभ कुन राशि-लाई कुन धातु शुभ ? सबैले जान्नुहाेस”, लाभ कुन राशि-लाई कुन धातु शुभ ? सबैले जान्नुहाेस यो आफ्नो राशी- ज्योतिषमा ९ ग्रह बताइएको छ भने सबै ग्रहसँग सम्बन्धीत अगल अलग धातु पनि उल्लेख गरिएको छ। कुण्डलीमा यदी कुनै अग्र अशुभ भएमा उससँग सम्बन्धीत उपाय अप्नाउँदा दोषबाट
मुक्ति मिल्ने गर्दछ। ग्रह दोष हटाउने उपायमध्ये एक उपाय स्वामी ग्रहर मित्र ग्रहसँग सम्बन्धीत धातु आफ्नो साथमा राख्नु हो। धातुको औँठी बनाएर हातको औँलामा लगाउने वा चेन बनाएर घाँटीमा लगाउन सकिन्छ। आज हामी तपाईलाई कुन राशिका व्यक्तिलाई कुन धातु भाग्यशाली हुने गर्दछ भन्ने बारे जानकारी दिदैछौँ। सुनः गुरु सुनको कारक ग्रह हो।
यो धातु मेष, कर्कट, सिंह, धनु र मिन राशिका लागि शुभ मानिन्छ। पितलः पितल धातुसँग सम्बन्धीत ग्रह गुरु हो। जुन व्यक्तिको राशि मेष, कर्कट, सिंह, धनु र मिन हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि पितल निकै शुभ मानिने गरिन्छ। तामाः यस धातुको कारक ग्रह सूर्य हो। जुन व्यक्तिको राशि मेष, सिंह वा वृश्चिक हुन्छ,
त्यस्ता व्यक्तिलाई तामाको धातु लगाउनु फाइदाजनक मानिन्छ। फलामः ग्रहका धनु र मिन राशिका लागि शुभ मानिन्छ। पितलः पितल धातुसँग सम्बन्धीत ग्रह गुरु हो। जुन व्यक्तिको राशि मेष, कर्कट, सिंह, धनु र मिन हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि पितल निकै शुभ मानिने गरिन्छ।
तामाः यस धातुको कारक ग्रह सूर्य हो। जुन व्यक्तिको राशि मेष, सिंह वा वृश्चिक हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई तामाको धातु लगाउनु फाइदाजनक मानिन्छ। फलामः ग्रहका न्यायाधीश शनिदेव फलामका कारक ग्रह हुन्। यो धातु मकर र कुम्भ राशी हुने व्यक्तिका लागि शुभ मानिन्छ। काँसः काँस एक मिश्रित धातु हो।
यसलाई बुध ग्रहसँग सम्बन्धीत धातु मानिन्छ। मिथुन र कन्या राशिका व्यक्तिका लागि यो धातु भाग्यशाली मानिन्छ। चाँदीः चाँदी धातुका स्वामी चन्द्र हुन्। यो धातु वृष, कर्कट, तुला, वृश्चिक र मिन राशिका लागि शुभ मानिन्छ। फलामः ग्रहका न्यायाधीश शनिदेव फलामका कारक ग्रह हुन्। यो धातु मकर र
कुम्भ राशी हुने व्यक्तिका लागि शुभ मानिन्छ। काँसः काँस एक मिश्रित धातु हो। यसलाई बुध ग्रहसँग सम्बन्धीत धातु मानिन्छ। मिथुन र कन्या राशिका मिथुन र कन्या राशिका व्यक्तिका लागि यो धातु भाग्यशाली मानिन्छ। चाँदीः चाँदी धातुका स्वामी चन्द्र हुन्। यो धातु वृष, कर्कट, तुला, वृश्चिक र मिन
राशिका लागि शुभ मानिन्छ। ज्योतिषमा ९ ग्रह बताइएको छ भने सबै ग्रहसँग सम्बन्धीत अगल अलग धातु पनि उल्लेख गरिएको छ। कुण्डलीमा यदी कुनै अग्र अशुभ भएमा उससँग सम्बन्धीत उपाय अप्नाउँदा दोषबाट मुक्ति मिल्ने गर्दछ उपाय अप्नाउँदा दोषबाट मुक्ति मिल्ने गर्दछ।
पक्की घरभित्रै यति ठूलो बाढी पस्यो, एकाएक डु’ब्न थालेपछि हेर्नुस् रातारात एस्तोसम्म भयो ।। (भिडियो हेर्नुस्) ।। पक्की घरभित्रै यति ठूलो बाढी पस्यो, एकाएक डु’ब्न थालेपछि हेर्नुस् रातारात एस्तोसम्म भयो ।। (भिडियो हेर्नुस्)
Previous Article काठमाण्डौंमा उर्लिएको बाढी तरकारी बजारमा पस्यो, लाखौँको सामान हेर्दाहेर्दै डुब्यो !! (भिडियो हेर्नुस्)
Next Article राशिफल : २०७८ श्रावण १२ गते मंगलवार, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल शुभ रङ्ग र शुभ अंक सहित || निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य